Posted by Tranquillus | Sep 20, 2018 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Haddii ay tahay in la xaajoodo maalgelinta tababarka ee mashruucaaga ama in aad soo bandhigto fikradahaaga kaliya, waxaa muhiim ah in la barto farshaxanka qancinta, gaar ahaan haddii aad tani u dhalatay ma ahan mid dhalasho. Waa kuwan talooyin noocee ah oo aad codsan kartid dhammaan xaaladaha.
Si aad u aqbalto kuwa kale
In labada shaqsi iyo xirfadba labadaba, waxaa muhiim ah in la gaaro hadafyo mudo dheer ah. Jidka oo dhan, waa inaad samaysaa allabaryo, mararka qaar faa'iido leh si aad awood ugu yeelatid inaad sii haysatid ciyaartoyda muhiimka ah ee horumarkaaga xirfadeed. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku soo dhawaato saaxibadaada inta aad ku heleyso jacaylkooda.
Beeraha iyada oo aan ahayn madax-bannaani
No arrinta sida ay muhiim adigu dharkaaga fikrado, aad boos oo ka fogaadaan weerarada kaliga si aad ama aad dhagaystayaasha uusan si qeexan aan ku jira fikradahaaga. trick waa in midab dhexdhexaad ah oo dhan aad soo bandhigidda iyo ka tago markii dhagaystayaasha aad u dheefshiido ama wax kasi dood aad. Haddii ay kuwani yihiin kuwo ku filan, dhagaystayaashaada ayaa ogaanaya.
U diyaari fikradaada
Dhinaca kale, soo bandhig mashruuca ama fikradahaaga oo ah qaab su'aal waxay u dhigantaa weydiinta xaqiijinta dhagaystayaashaada. Markaa iska ilaali inaad ku dhacdo khaladkan. Haddii aad ka walwalsan tahay in fikradahaagu ay umuuqdaan wax yar uun, ha tusin. Ka mabnuuco "Waxaan u maleynayaa" ama "waa suurtagal" eray bixintaada, hubi in ereyadaadu muujinayaan kalsoonidaada guud ee doodaada.
Si aad si wacan u diyaariso khudbadahaaga, ka hor intaadan helin nooca dhagaystayaasha aad la hadli doonto. Aqoontooda shakhsiyaddooda, qiimayaashooda, caadooyinkooda, baahidooda iyo kuwo kale. Waxaad ogaan doontaa tafaasiisha qaadashada inta lagu guda jiro kulan ama wareysi iyo garbahaaga ayaa hubaal noqon doona mid sax ah. Farriintaadu waxay noqon doontaa mid aad u badan in la aqbalo.
READ Waraaqda xisaabta keydinta waqtiga si aad u soo dejiso
Dooro sawirro tayo leh
Intaas waxaa dheer, doodaha iyo fikradaha aad horey u sii wadi doonto ayaa si fudud loo dhigi doonaa maskaxda haddii ay ku taageeraan sawirro muujinaya muhiimadda. Ku diyaari fiidiyo, sawir iyo qaab sawireed, tani waxay culeys ku noqon doontaa faallooyinkaaga. Dhageystayaashaagu waxay awood u yeelan doonaan aragti cad oo ku saabsan fikradaha, fikradaha, talooyinka ama natiijooyinka.
Luqad jireed oo wanaagsan
Ha ilaawin inaad sheegto waxa aad ku yiraahdo inaad ku dhiirigeliso soo jeedintaada iyo inaad xoogga saarto naftaada mashaariicdaada ama fikradahaaga. Tusaale ahaan, madaxaaga ku tiirsan dhagaystayaashaada waa calaamad muujinaysa in soo celinta ay sameeyeen dadweynaha. Dhinaca kale, qalabka isgoysyada ayaa muujinaya in lagu xiray hadalada dibadda.
Wuu qosli karaa si uu u qanciyo
Waxaan mar kale ku celcelinaynaa, dhoola cadeyn, sababtoo ah dhoola-cad ayaa la is qaadsiin karaa. Waa dabeecad dabiici ah oo aan la iloobi karin ee bani-aadmiga ah kaas oo u hoggaansamaya qaddarinta qofka wada hadlaya. Wuxuu markaas dib ugu soo celin doonaa si dabiici ah. Marka aad ka fekereyso dhoola-gal, fikradahaagu waxay ka dhigayaan kuwa raacsan oo ka badan kuwa la aasayo.
Ogolow naqshad waxtar leh
Xusuuso in mashruuc kasta uu yeelan karo cillad, midkoodna u maleyneynin inuu yahay mid kufiican. Si kastaba ha ahaatee, u oggolaanshaha dhagaystayaashaada inay tilmaamaan ama ay saxaan waxay muujinaysaa inaad daneyneyso inaad difaacdo iyaga. Adoo cusbooneysiinaya farriimaha hab kale, waxaad xaqiijinaysaa fahamkaaga codsiyada iyo baahidooda. Dabeecaddani waxay xaqiijin doontaa dadweynaha furfuran fikradaha cusub iyo inaad u xaqiijiso dadka laga yaabo inay u maleynayaan inaad isku dayayso inaad ku soo rogto fikradahooda shakhsi ahaaneed.
READ Qaabka asluubta caadiga ah wuxuu ka kooban yahay 4 walxood
Muuji xiisaha dadka kale adoo waydiinaya su'aalo
Maxay dadka dhagaystayaashu kuu siinayaan daneyn haddii adiga, naftaada, ay u muuqato in ay si gebi ahaanba ah u jahwareeraan fikradahaaga qarsoodiga ah ee ku soo bandhigay adiga kahor? U fiirso dhammaan dareenkaaga inta lagu jiro soojeedintooda, si ay iyaguna kuugu siiyaan sidii ay kuugu sarreeyaan. Si aad tan u samayso, weydii su'aalaha ku habboon ee hubiya dantaada iyo ixtiraamka lidka ah.
Wac xiriiriyahaaga magaciisa
Waxaan sidoo kale ogsoonahay in dadka ay ugu yeedhaan magacooda ay dareemayaan inay tixgeliyaan. Xaqiiqdii, waxaynu la kulannaa raaxo gaar ah marka lagu magacaabo magacayaga. Sidaa darteed saameyntu waa joogto, sidaa daraadeed naftaada xaddidna salaan, sameeya inta lagu jiro wadahadalkaada, iyadoon loo eegin shayga. Sidaa awgeed, si toos ah adiga oo wax uga qabta qofka aad wada hadlaysaan wuxuu kuu oggolaanayaa inaad kor u qaaddo awoodaada qancintaada.
Isku dhig u naftaada si aad uhesho qofka kugula hadlaya
Way adag tahay, si kastaba ha ahaatee, inuu aqbalo doodda qof qalaad ah, iskuday inaad kalsooni ku qabtid. Soo bandhiga ayaa ciribtiraya caqabadan. Indeed, wax kasta oo ku tacaluqa aad fikrado, muhiimadda ay leedahay mashruuca idiin hoggaamin, lammaanahaaga had iyo jeer shaki doodaha sida aad ku sii shisheeye ah wadarta iyadii. Kaliya tusaya nooca qof ee aad tahay waxa uu u horseedi doonaa is waafaqsanaan.
Ku qanco sabab loo aaminsan yahay
Si aad u noqoto mid aad u qanacsan, u taageera fikradaha iyo doodaha ama mawduucyada adiga ku daneynaya, adoo aanad "sameynin". Xaqiiqdii, dadku waxay ku qanacsan yihiin sababaha ay u taageersan yihiin dabeecad ahaan iyaga oo ammaan ah. Sidaa darteed, way kuu fududaan doontaa inaad ku qanciso dhagaystayaashaada haddii adiga, naftaada, rumeeyso fikradahaada, doodahaaga ama mashaariicdaada.
U ogolow dhagaystayaashaada in ay si tartiib ah u yareeyaan fikirkooda
Farshaxanka ku qanacsan wuxuu sidoo kale ku xiran yahay dulqaadkaaga adiga iyo dadka aad la wadaagtaan si aad u fahamto fikradahaaga. Ha ku sii wadin waddo isku mid ah haddii marka hore aragtidaada iyo doodahaagu ay u muuqdaan kuwo aan dhameystirneyn. Xaqiiqdii, ku adkaysiga dhagaystayaashaada ayaa soo saari kara saameynta soo socota ee hadafkaaga. Si looga hortago qofka kale inuu xiro, sii naftaada si aad u beddesho ama u hagaajiso.
Sidoo kale, si uu uga dhaadhiciyo inuu qof walbahaar ah, waa in la ogaadaa si uu u hagaajiyo hadalkiisa. Hagaajinta macaamiishaada shucuurta ayaa hubaal ka dhigaysa inaad la qabsato waxqabadyo kala duwan ee dhagaystayaashaaga. Jihada si joogto ah jihadaas, waxaad hubaal ka heli doontaa natiijooyin badan oo dheeraad ah.
Sidee loogu qancin karaa goob shaqo? Nofeembar 25th, 2018Tranquillus
horeRaadi isku dheelitirka u dhexeeya nolol shakhsi iyo xirfad leh
socdaCadaadiska, dib u noqo dibna u sheeg shucuurtaada siyaabo waxtar leh.